I-Rekindle Romance kuDance Floor | UFred Astaire
Rekindle Romance kuDance Floor
Melana nesilingo sosuku luka-Valentine lokuthatha indlela elula futhi uthenge ibhokisi lamashokolethi noma isixha sezimbali zama-rose wakho abalulekile. Qalisa kabusha ukuthandana nothandekayo wakho kwenye indlela entsha ngokubanika isifundo somdanso we-ballroom eFred Astaire Dance Studios yangakini.
Ukudansa kweBallroom kunikeza ithuba lezothando lokuqinisa ubudlelwano benu kulo Februwari. Ukudansa kozakwethu kuqinisekisa ukuthi izithandani zingasebenzisana ukuze ziphumelele. Abadansi kudingeka banake kakhulu abalingani babo futhi balandele izinkomba ezingasho lutho ukuze bafunde ukudansa. Izithandani ezijabule ndawonye, ​​hlala ndawonye. Ochwepheshe bayavuma - ukwabelana ngezinto zokuzilibazisa kungaholela ebudlelwaneni obuqinile. Imibhangqwana ejabule kakhulu yilabo abafana, ngokusho kocwaningo lwango-2019 lwemibhangqwana engu-2,327 XNUMX ethunyelwe eHarmony, iwebhusayithi yokuphola online. Ngenkathi ukudansa kwe-ballroom kungakusiza ukuthi uxhume kabusha njengabashadile, futhi kungathuthukisa ukuqina komzimba wakho. Ukudansa kuyindlela emnandi yokuthuthukisa impilo yakho yenhliziyo nokuqinisa ithoni yemisipha yakho.
UFred Astaire Dance Studios ufundisa ubuciko bezothando bokudansa nge-ballroom kubantu kuyo yonke iminyaka nezigaba zempilo yabo. Umholi womhlaba wonke kuma-franchise womdanso unezindawo kulo lonke elase-United States nasemhlabeni jikelele. Ukudansa kweBallroom kunikeza inhlanganisela ephelele yomsebenzi womzimba, ukuxhumana nomphakathi kanye nokukhuthaza kwengqondo. Yonke indawo kaFred Astaire Dance Studios inikeza isimo somusa, amandla nokuzijabulisa. Ngamunye wabo unikela ngezifundo ezahlukahlukene ezifundiswa abafundisi abaqinisekisiwe abalandela amasu aqashwe ngumdansi odume kakhulu, uFred Astaire. KwakunguFred Astaire uqobo owayengamele ukuvulwa kwendawo yokuqala yale nkampani eNew York. Uhlelo lokufundisa lukaFred Astaire Dance Studios lwenza abadansi abasha bathole ukuzethemba namakhono, noma ngemuva kwesifundo esisodwa kuphela.
Ungavuselela uthando nomuntu omthandayo endaweni yokudansa. Kepha ungathathi nje izwi lethu ngakho. Bheka laba badansi abathandana namanye amafilimu adumile.
UMaria uyavuma ukudansa noCaptain von Trapp ngesikhathi somcimbi womndeni kumculo wakudala, "Umsindo Womculo."
Kukwenziwa kabusha kuka-2015, uCinderella udansa neNkosana ngebhola lasebukhosini, futhi laba bobabili bathandana kakhulu.
Noma yiluphi uhla lwama-movie othando kufanele lubandakanye indawo yomdanso oyisithonjana okulingisa kuyo abalingisi uPatrick Swayze noJennifer Gray ku- “Dirty Dancing.”
UFred Astaire wadlala ezigcawini eziningi zomdanso wothando ngesikhathi somsebenzi wakhe ohlonishwayo. Ku- "Top Hat," i-Astaire idansa no-Ginger Rogers.
Qalisa kabusha ukuthandana nalowo muntu okhethekile empilweni yakho ngokuziphatha ngothando ngalolu suku luka-Valentine. Vakashela iFred Astaire Dance Studios yangakini ukuze ufunde mayelana nokunikezwa okukhethekile kwesingeniso.